သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် …လူထွက်တော့မယ် …အဖေ၊ အမေရယ်…. ဘာဖြစ်လို့လဲ…ဆရာလေးရယ် – ရွှေအလင်း
သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် …လူထွက်တော့မယ် …အဖေ၊ အမေရယ်…. ဘာဖြစ်လို့လဲ…ဆရာလေးရယ်
” လူထွက်တော့မယ် အဖေရယ် အမေရယ်”
က လင်.……… ကလင် ဖုန်းခေါ်သံလေးကြားပြီးကိုင်လိုက်တော့ ဟဲလို ……… သမီးလား ဟုတ်တယ်အမေ သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေအမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် အေးပါကွယ် အမေ့ဆီသီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးတော့ပြန်ခဲ့ပါကွယ်။ ဒေါ်တင်မေ တစ်ယောက်အတွေးများစွာနှင့်နေပြီးစဉ်းစားနေတော့တယ်
။မွေး ထား တဲ့ သားသမီး ၃ ယောက်ထဲမှာ “သမီးသီလရှင်လေးကအကြီးဆုံး သားလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူတကွနေတာပေါ့သမီးလေးကို ၁၀ နှစ်အရွယ်တည်းကသီလရှင်ဝတ်ပေးခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းမှာဘုရားစာပါဠိတွေကိုသင်ယူစေခဲ့တယ်။သမီးလေးအဖေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အလုပ်သွားလုပ်ပီး မိခင်တစ်ယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာကိုသနားလို့ထင်ပါတယ် သမီးကဒီနှစ်မှလူထွက်မယ် စကားကိုပြောတော့ ဒေါ်တင်မေခင်များမှာ ငိုရမလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
သမီးေ လး ကိုတော့ချော့ပြောလိုက်တာဘဲရွာကိုအရောက်တော့ပြန်ခဲ့အုံးလို့ မှာလိုက်တာဘဲ ဘုရား ဘုရားသမီးလေး သီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးနှင့်ဘဲပြန်ခဲ့ပါစေဘုရား ဆိုပြီး ဘုရားရှေ့မှာဆုတောင်းနေပြီးလေ။
ရွက်ေ ဟာင်းေ တွကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေချိန်မှာ ဒေါ်တင်မေထံ သမီးလေးသီလရှင်ပြန်လာမယ့်သတင်း ကြားတော့ ရွာလယ်ပိုင်းကသူဋ္ဌေးတစ်ဦးဆီမှာ ပိုက်ဆံ ၂ သိန်းလောက်သွားချေးပြီး သမီးလေးအတွက် SAMSUNG ဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်ထားလိုက်တယ်။
သူ့ စိတ် ကူး ကတော့သမီးလေးကို ဒီဖုန်းလေးနှင့်ချော့ပြီးလူမထွက်အောင်တားမယ်ပေါ့။ ဟော…… သမီးလေးကရောက်လာပြီးအမေ……အမေ ရေလို့အော်ခေါ်ပြေးဖက်ထားပြီးသားမိနှစ်ယောက်အပြိုင်ငိုနေကြပြီး။ဒေါ်တင်မေက သမီးလေးမျက်နှာမှမျက်ရည်တွေကိုလက်လေးနှင့် သုတ်ပေးပြီး ငါ့သမီးလေးအရမ်းပိန်သွားပါလားကွယ် သမီးရယ် စိတ်တွေဘယ်လောက်ဆင်းရဲနေလို့ဟင်း အမေ့ကိုပြောပြပါကွယ်။
အမေ ရယ် သမီးလူထွက်ချင်တာ အမေ့ကိုသနားလို့ပါ။အမေမောင်လေးနှစ်ယောက်က်ို တစ်ယောက်တည်းလုပ်ကျွေးနေတာသမီးမကြည့်ရက်လို့ပါအမေ။သမီးရယ်အမေကိုထည့်မတွက်ပါနဲ့ သမီးလေးအဆင်ပြေဖို့ကအဓိကပါ အမေကဘာမှမဖြစ်ဘူး
ကဲ ကဲ သမီးလေးအမေ့တွက်ဆို လူတော့မထွက်ပါနဲ့နော် အမေရယ် သမီးလေးသီလရှင်ဘဝကိုမြတ်နိုးပါတယ် ဒါပေမဲ့လေ အရာရာမှာနိမ့်ကျလွန်းပြီး ဘေးဖယ်ထားတဲ့ သမီးတို့ဘဝကိုကြာလာတော့စိတ်ပျက်မိတယ်အမေ။
သမီးတို့မှာ ဘုန်းကြီးကိုရင်တွေလို ဆွမ်းခံစားရတာမဟုတ်ဘဲ အဖိတ်နေ့ ဥပုသ်နေ့လေးတွေမှာ ရပ်တကာ မြို့တကာလှည့်ပြီး နေပူခံမိုးရွာမိ တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ်ထွက်ဆန်လေးတွေလိုက်အလှူ ခံရတာပါအမေ။တစ်အိမ်မှာ ဆန်တစ်ဇွန်လောက်ဘဲရပြီး တစ်ရပ်ကွက်လုံးမှဆန်လေး ၃ ပြည်လောက်ရ
အဲဒီဆန်တွေကို ဈေးဆိုင်မှပြန်ရောင်း ရတဲ့ငွေလေးတွေနှင့်သမီးတို့၏အာဟာရအတွက် ချက်ပြုတ်စားရတာပါအမေ။တစ်ချိူ့ဒကာတွေကပြောသေးတယ်အမေ ဒါနဆန်များပါရှင်လို့အလှူ ခံရင် နင်တို့လုပ်စားရှိလို့လား နင်တို့လင်အိမ်တွေမို့လားဆိုပြီး အပြောခံရတယ်အမေ သူတို့လောင်းတာကနည်းနည်း ပြောခံရတာတွေများလာတော့ ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့သမီးတို့နှလုံးသားတွေကကြာကြာမခံနိုင်တော့ဘူးအမေ
ဒီခေတ်ကြီးမှာတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ မိန်းကလေးအသုံးအဆောင်တွေကလည် လိုချင်စရာတွေပါဘဲ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ထိန်းငါဟာဘုရားသမီးတော်စစ်စစ် ဒါတွေနှင့် ငါကဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးအံကိုကြိတ်ပြီးစိတ်ကိုနိုင်ထိန်းထားခဲ့တယ်အမေ တစ်ခါတစ်လေမှာလေ ဘိက္ခုနီသာသနာ သီလရှင်သာသနာစခဲ့တဲ့
မိထွေတော်ဂေါတမီတို့ ယသော်ဓရာတို့ကိုအပြစ်တင်ချင်မိတယ်အမေ သူတို့ကဘုရားခွင့်မပြုခဲ့တာတောင် ဘိက္ခုနီသာသနာကိုရအောင်ဝင်ခဲ့တယ် သူတို့အဲဒီလိုဝင်ခဲ့လိုသမီးတို့သီလရှင်တွေ အခုလိုဝတ်နေရတာလို့အပြစ်မြင်မိတယ်အမေ ဒါတောင်တစ်ချိူ့ယောကျာင်္းတွေက သီလရှင်တွေကိုကန့်တော့ရင်ဘုန်းနိမ့်တယ်ထင်လား မသိဘူးအမေ
သမီးတို့ဆိုယောကျာင်္းတွေမရှိခိုးဘူး ရှိခိုးခံချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမေအနှိမ်ခံရလို့ပါ။ ရဟန်းတွေ ကိုရင်တွေဆိုလှူ မယ့်လူ ရဟန်းခံမယ် ရဟန်းဒကာတွေပေါမှပေါအမေ သမီးတို့ဆရာလေးတွေအသက် ၂၀ပြည့်လို့လဲဘယ်သူမှရဟန်းဒကာလာမခံပါဘူးအမေ
ကိုယ်ကျက်မယ့်စာအုပ်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ် ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လျှောက်လမ်းရတဲ့ခရီးတွေ ကြာလာတော့ပြိုလဲချင်နေပြီးအမေ ပြီးတော့အမေ ကျောင်းတွေမှာနေဖို့စရိတ်ကိုလည် ကျောင်းထိုင်ဆရာကြီးတွေကိုပေးရတယ်အမေ
သူတို့ကိုလည်အပြစ်မမြင်ပါဘူး ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကကြီး ရေဖိုး မီးဖိုးတွေနှင့် အပြင်ကကျောင်းသားတွေတက်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ဘာမှမပြောပါးပေမယ့် ဘယ်သူကမှ မလှူ တဲ့သမီးတို့ဘဝမှာတော့ ငွေတစ်သိန်းဆိုတာ
အင်မတန်မှရှားပါးပါတယ်အမေ့ကိုလည်ဒီထက်ဒုက္ခ မပေးချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သမီးကို လူထွက်ခွင့်ပေးပါနော် သမီးလေးက သူပြောချင်တာတွေပြောတာကိုနားထောင်ပြီး ရော့ ဒါသမီးအတွက်အမေဝယ်ပေးတာဖုန်းလေးကိုထုတ်ပေးတော့ သမီးလေးကဝမ်းသာသလိုရှိပေမဲ့ မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ အမေရယ် အမေ့မှာပိုက်ဆံမရှိဘဲ ဒီဖုန်းကိုဘာလို့ ဝယ်တာလဲအမေ သမီးနှင့်အမေဖုန်းပြောရအောင်ပေါ့ကွယ် ပြီးတော့သမီးလည်တရားတွေနား ဗဟုသုတတွေလည်ရှာလို့ရတာပေါ့ကွယ်
သမီးရယ်ယူပါသမီးလူမထွက်ရင်အမေဘာဘဲ လုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရ ဘာမှမဖြစ်ဘူး သမီးလေးလူမထွက်ဖို့သာအဓိကပါ သမီးတို့အခက်အခဲတွေကိုနားလည်ပါတယ်သမီးရယ် သမီးတို့မှာဒီသီလရှင်သာသနာကိုမထမ်းရင်ရှေ့ကထမ်းဆောင်သွားတဲ့ အမျိူးသမီးအရိယာကြီးတွေကိုအားနာတယ်သမီး အမေတို့မိန်းမသာသနာဆိုလို့
ဒီသီလရှင်သာသနာတစ်ခုဘဲရှိတယ်သမီး အရေအတွက်ကိုလည်ကြည့်အုံးသမီး သံဃာတွေ သိန်းချီပြီး ရှိနေပေမယ့်အမျိူးသမီးသာသနာပြုတွေကသောင်းဂဏန်းဘဲရှိတယ်သမီး ကျေးဇူးပြု ပြီးထမ်းဆောင်ပေးပါသမီးရယ် အမေတို့မိန်းမသားတွေအတွက်ဂုဏ်ယူရတဲ့ ဘုရားသာသနာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ပေးပါသမီးရယ် သမီးလေးလည် ဒေါ်တင်မေဆုံးမချက်တွေ နားထောင်ပြီးစစ်ကိုင်းကိုပြန်စာတွေသင်ပြီး ဓမ္မာစရိယထိပြီးအောင်နေသွားခဲ့တယ် ဆရာလေးအမည်ကတော့ မပညာနန္ဒတဲ့
သာသနာပြုနေသောအစ်မတော် ညီတော်များ၏ဘဝတွေကို ဤစာဖြင့်ရေးသားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။ မိန်းမဘဝရပေမဲ့ရလာတဲ့လူဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲ ရဟန်းသံဃာများနှင့်တန်းတူသာသနာပြုနေတဲ့အတွက်အစဉ်လေးစားနေပါသည်။ သီလရှင်လေးများကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ။
Credit – myanmardailytime
” လူထှကျတော့မယျ အဖရေယျ အမရေယျ”
ကလငျ.……… ကလငျ ဖုနျးချေါသံလေးကွားပွီးကိုငျလိုကျတော့ ဟဲလို ……… သမီးလား ဟုတျတယျအမေ သမီးဒီနှဈပွနျလာရငျ လူထှကျတော့မယျ အဖအေမေ ဘာဖွဈလို့လဲဆရာလေးရယျ အေးပါကှယျ အမဆေီ့သီလရှငျဝတျရဲ့လေးတော့ပွနျခဲ့ပါကှယျ။ ဒျေါတငျမေ တဈယောကျအတှေးမြားစှာနှငျ့နပွေီးစဉျးစားနတေော့တယျ
။မှေးထားတဲ့သားသမီး ၃ ယောကျထဲမှာ “သမီးသီလရှငျလေးကအကွီးဆုံး သားလေးနှဈယောကျနှငျ့အတူတကှနတောပေါ့သမီးလေးကို ၁၀ နှဈအရှယျတညျးကသီလရှငျဝတျပေးခဲ့ပွီး စဈကိုငျးမှာဘုရားစာပါဠိတှကေိုသငျယူစခေဲ့တယျ။သမီးလေးအဖကေငယျငယျရှယျရှယျနှငျ့အလုပျသှားလုပျပီး မိခငျတဈယောကျတညျးရုနျးကနျနရေတာကိုသနားလို့ထငျပါတယျ သမီးကဒီနှဈမှလူထှကျမယျ စကားကိုပွောတော့ ဒျေါတငျမခေငျမြားမှာ ငိုရမလို ဖွဈနခေဲ့တယျ။
သမီးလေးကိုတော့ခြော့ပွောလိုကျတာဘဲရှာကိုအရောကျတော့ပွနျခဲ့အုံးလို့ မှာလိုကျတာဘဲ ဘုရား ဘုရားသမီးလေး သီလရှငျဝတျရဲ့လေးနှငျ့ဘဲပွနျခဲ့ပါစဘေုရား ဆိုပွီး ဘုရားရှမှေ့ာဆုတောငျးနပွေီးလေ။
ရှကျဟောငျးတှကွှေေ ရှကျသဈတှဝေခြေိနျမှာ ဒျေါတငျမထေံ သမီးလေးသီလရှငျပွနျလာမယျ့သတငျး ကွားတော့ ရှာလယျပိုငျးကသူဋ်ဌေးတဈဦးဆီမှာ ပိုကျဆံ ၂ သိနျးလောကျသှားခြေးပွီး သမီးလေးအတှကျ SAMSUNG ဖုနျးလေးတဈလုံးဝယျထားလိုကျတယျ။
သူ့စိတျကူးကတော့သမီးလေးကို ဒီဖုနျးလေးနှငျ့ခြော့ပွီးလူမထှကျအောငျတားမယျပေါ့။ ဟော…… သမီးလေးကရောကျလာပွီးအမေ……အမေ ရလေို့အျောချေါပွေးဖကျထားပွီးသားမိနှဈယောကျအပွိုငျငိုနကွေပွီး။ဒျေါတငျမကေ သမီးလေးမကျြနှာမှမကျြရညျတှကေိုလကျလေးနှငျ့ သုတျပေးပွီး ငါ့သမီးလေးအရမျးပိနျသှားပါလားကှယျ သမီးရယျ စိတျတှဘေယျလောကျဆငျးရဲနလေို့ဟငျး အမကေို့ပွောပွပါကှယျ။
အမရေယျသမီးလူထှကျခငျြတာ အမကေို့သနားလို့ပါ။အမမေောငျလေးနှဈယောကျကျို တဈယောကျတညျးလုပျကြှေးနတောသမီးမကွညျ့ရကျလို့ပါအမေ။သမီးရယျအမကေိုထညျ့မတှကျပါနဲ့ သမီးလေးအဆငျပွဖေို့ကအဓိကပါ အမကေဘာမှမဖွဈဘူး
ကဲ ကဲ သမီးလေးအမတှေ့ကျဆို လူတော့မထှကျပါနဲ့နျော အမရေယျ သမီးလေးသီလရှငျဘဝကိုမွတျနိုးပါတယျ ဒါပမေဲ့လေ အရာရာမှာနိမျ့ကလြှနျးပွီး ဘေးဖယျထားတဲ့ သမီးတို့ဘဝကိုကွာလာတော့စိတျပကျြမိတယျအမေ။
သမီးတို့မှာ ဘုနျးကွီးကိုရငျတှလေို ဆှမျးခံစားရတာမဟုတျဘဲ အဖိတျနေ့ ဥပုသျနလေ့ေးတှမှော ရပျတကာ မွို့တကာလှညျ့ပွီး နပေူခံမိုးရှာမိ တဈအိမျဝငျတဈအိမျထှကျဆနျလေးတှလေိုကျအလှူ ခံရတာပါအမေ။တဈအိမျမှာ ဆနျတဈဇှနျလောကျဘဲရပွီး တဈရပျကှကျလုံးမှဆနျလေး ၃ ပွညျလောကျရ
အဲဒီဆနျတှကေို စြေးဆိုငျမှပွနျရောငျး ရတဲ့ငှလေေးတှနှေငျ့သမီးတို့၏အာဟာရအတှကျ ခကျြပွုတျစားရတာပါအမေ။တဈခြိူ့ဒကာတှကေပွောသေးတယျအမေ ဒါနဆနျမြားပါရှငျလို့အလှူ ခံရငျ နငျတို့လုပျစားရှိလို့လား နငျတို့လငျအိမျတှမေို့လားဆိုပွီး အပွောခံရတယျအမေ သူတို့လောငျးတာကနညျးနညျး ပွောခံရတာတှမြေားလာတော့ ပုထုဇဉျဆိုတဲ့သမီးတို့နှလုံးသားတှကေကွာကွာမခံနိုငျတော့ဘူးအမေ
ဒီခတျေကွီးမှာတိုးတကျလာတာနှငျ့အမြှ မိနျးကလေးအသုံးအဆောငျတှကေလညျ လိုခငျြစရာတှပေါဘဲ ဒါပမေဲ့ကိုယျ့စိတျကိုပွနျထိနျးငါဟာဘုရားသမီးတျောစဈစဈ ဒါတှနှေငျ့ ငါကဘာမှမဆိုငျဘူးဆိုပွီးအံကိုကွိတျပွီးစိတျကိုနိုငျထိနျးထားခဲ့တယျအမေ တဈခါတဈလမှောလေ ဘိက်ခုနီသာသနာ သီလရှငျသာသနာစခဲ့တဲ့
မိထှတေျောဂေါတမီတို့ ယသျောဓရာတို့ကိုအပွဈတငျခငျြမိတယျအမေ သူတို့ကဘုရားခှငျ့မပွုခဲ့တာတောငျ ဘိက်ခုနီသာသနာကိုရအောငျဝငျခဲ့တယျ သူတို့အဲဒီလိုဝငျခဲ့လိုသမီးတို့သီလရှငျတှေ အခုလိုဝတျနရေတာလို့အပွဈမွငျမိတယျအမေ ဒါတောငျတဈခြိူ့ယောကြာင်ျးတှကေ သီလရှငျတှကေိုကနျ့တော့ရငျဘုနျးနိမျ့တယျထငျလား မသိဘူးအမေ
သမီးတို့ဆိုယောကြာင်ျးတှမေရှိခိုးဘူး ရှိခိုးခံခငျြလို့ပွောတာမဟုတျပါဘူးအမအေနှိမျခံရလို့ပါ။ ရဟနျးတှေ ကိုရငျတှဆေိုလှူ မယျ့လူ ရဟနျးခံမယျ ရဟနျးဒကာတှပေေါမှပေါအမေ သမီးတို့ဆရာလေးတှအေသကျ ၂၀ပွညျ့လို့လဲဘယျသူမှရဟနျးဒကာလာမခံပါဘူးအမေ
ကိုယျကကျြမယျ့စာအုပျကို ကိုယျ့ဘာသာကိုယျဝယျ ကိုယျ့ဘဝကိုယျလြှောကျလမျးရတဲ့ခရီးတှေ ကွာလာတော့ပွိုလဲခငျြနပွေီးအမေ ပွီးတော့အမေ ကြောငျးတှမှောနဖေို့စရိတျကိုလညျ ကြောငျးထိုငျဆရာကွီးတှကေိုပေးရတယျအမေ
သူတို့ကိုလညျအပွဈမမွငျပါဘူး ဒီဘကျခတျေမှာ ကုနျစြေးနှုနျးတှကေကွီး ရဖေိုး မီးဖိုးတှနှေငျ့ အပွငျကကြောငျးသားတှတေကျတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ဘာမှမပွောပါးပမေယျ့ ဘယျသူကမှ မလှူ တဲ့သမီးတို့ဘဝမှာတော့ ငှတေဈသိနျးဆိုတာ
အငျမတနျမှရှားပါးပါတယျအမကေို့လညျဒီထကျဒုက်ခ မပေးခငျြတော့ဘူးဒါကွောငျ့သမီးကို လူထှကျခှငျ့ပေးပါနျော သမီးလေးက သူပွောခငျြတာတှပွေောတာကိုနားထောငျပွီး ရော့ ဒါသမီးအတှကျအမဝေယျပေးတာဖုနျးလေးကိုထုတျပေးတော့ သမီးလေးကဝမျးသာသလိုရှိပမေဲ့ မကျြရညျတှကေလြာတယျ။ အမရေယျ အမမှေ့ာပိုကျဆံမရှိဘဲ ဒီဖုနျးကိုဘာလို့ ဝယျတာလဲအမေ သမီးနှငျ့အမဖေုနျးပွောရအောငျပေါ့ကှယျ ပွီးတော့သမီးလညျတရားတှနေား ဗဟုသုတတှလေညျရှာလို့ရတာပေါ့ကှယျ
သမီးရယျယူပါသမီးလူမထှကျရငျအမဘောဘဲ လုပျပေးရ လုပျပေးရ ဘာမှမဖွဈဘူး သမီးလေးလူမထှကျဖို့သာအဓိကပါ သမီးတို့အခကျအခဲတှကေိုနားလညျပါတယျသမီးရယျ သမီးတို့မှာဒီသီလရှငျသာသနာကိုမထမျးရငျရှကေ့ထမျးဆောငျသှားတဲ့ အမြိူးသမီးအရိယာကွီးတှကေိုအားနာတယျသမီး အမတေို့မိနျးမသာသနာဆိုလို့
ဒီသီလရှငျသာသနာတဈခုဘဲရှိတယျသမီး အရအေတှကျကိုလညျကွညျ့အုံးသမီး သံဃာတှေ သိနျးခြီပွီး ရှိနပေမေယျ့အမြိူးသမီးသာသနာပွုတှကေသောငျးဂဏနျးဘဲရှိတယျသမီး ကြေးဇူးပွု ပွီးထမျးဆောငျပေးပါသမီးရယျ အမတေို့မိနျးမသားတှအေတှကျဂုဏျယူရတဲ့ ဘုရားသာသနာအဖွဈထမျးဆောငျပေးပါသမီးရယျ သမီးလေးလညျ ဒျေါတငျမဆေုံးမခကျြတှေ နားထောငျပွီးစဈကိုငျးကိုပွနျစာတှသေငျပွီး ဓမ်မာစရိယထိပွီးအောငျနသှေားခဲ့တယျ ဆရာလေးအမညျကတော့ မပညာနန်ဒတဲ့
သာသနာပွုနသေောအဈမတျော ညီတျောမြား၏ဘဝတှကေို ဤစာဖွငျ့ရေးသားဂုဏျပွုလိုကျပါသညျ။ မိနျးမဘဝရပမေဲ့ရလာတဲ့လူဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲ ရဟနျးသံဃာမြားနှငျ့တနျးတူသာသနာပွုနတေဲ့အတှကျအစဉျလေးစားနပေါသညျ။ သီလရှငျလေးမြားကိုတနျဖိုးထားနိုငျကွပါစေ။
ဒီနွေကအပူရှိန်များပြီး …မိတ်တွေထွက်ကြလို့ …မိတ်ပျောက်တဲ့ဆေးနည်းလေး… မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ရေပူရေအေး သုံးရင်း ဓ်ါတ်လိုက်သေသွားတယ် တဲ့ဗျာ 😥 ဆေးရုံတွေ ဟိုတယ်တွေရောက်ရင် သတိပြုကြပါ
ပျက်စီးလိုတဲ့သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြည့်အောင်ဟုဆိုကာ ပညာရှိဆန်ဆန်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ကိုရန်လေး
ရှင့်အဖေကို ကျမအိမ်ပေါ်မှာမထားနိုင်ဘူး ပြောတဲ့ မိန်းမကို ပြစ်ပြီး ဖခင်ကို...
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဒါမျိုးတွေတောင် ဖြစ်နေကျပြီတဲ့ဗျာ ….
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို.. မြို့နယ် ၂ မြို့နယ် ခွဲခြမ်းမည့်အစီအစဉ်..အပြည့်အစုံ
လားရိူး ပရဟိတ လူနာယာဉ် မောင်းရင်း ပစ်ခတ်ခံရပြီး အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဦးထွန်းမြင့်...